Afrikana No Lalao Voalohany Nihanaka Be Indrindra: Ny Fomba Nielezan’ny Lalao Nentin-drazana Hanenika Ny Tontolo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Avrily 2015 5:59 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Nederlands, English, Español, Português, русский, 日本語, Ελληνικά, Français
Waali, lalao nentin-drazana ao Mali, fanomezan-dàlan'i Boukary
7032 kilaometatra no manasaraka an'i Bamako, renivohitr'i Mali sy Antananarivo, renivohitr'i Madagasikara kanefa dia azo tsapain-tànana ny fisian'ny rohy efa an-jato taonany eo amin'ireo firenena roa ireo.
Tsy zavatra mahagaga loatra izany. Na eo aza ny elanelan-tany, ny fiaviana Bantous iraisan'izy roa tonta (sy ireo mpifanila vodirindrina aminy) dia manazava ireo teboka sasantsasany iraisan'ny kolontsain-dry zareo.
Sarintanin'ny fifindrà-monin'ireo bantoues tao Afrika, avy amin'i Mark Dingemasse CC-BY-2.5
Vavolombelon'io fifindràmonina goavana sy fifangaroan'ny kolontsaina eo amin'ny tanibe Afrika io, dia hita ao ny lalaon'ny paikady nentin-drazana izay ankafizin'ireo mponina am-bohitra any Sahel ka hatramin'ireo mpanjono any amin'ny lakandranon'i Maozambika. Lalao nentin-drazana avy any Mali ny Waali. Na dia mbola hita any amin'ny vohitra sasantsasany aza izy io, dia azo lazaina ho efa nanjavona ihany ao Mali. Eo amin'ny sary fampidirana, novokarina avy amin'ny ‘banco’ nofetaina ny lalao, fa afaka hita ihany koa amin'ny endrika vita tamin'ny hazo. Tany am-piandohana, lalao natokana ho an'ny mpanjaka sy ireo sakaizany izy io. Avy eo, navela ho azon'ny daholobe lalaovina ny Waali.
Lova, mpiara-miasa amin'ny Global Voices, dia manamarika fitovitoviana manan-danja amin'izy io sy lalao iray hafa fa Malagasy, ny Katro. Nipoitra niaraka tamin'ny fahatongavan'ireo andianà bantou mpifindra monina tany amin'ny morontsiraka Malagasy teo amin'ny taonjato faha-17 ny Katro. Hoy i Lova ao amin'ny twitter:
« Fitoviana mahazendana eo amin'ny Waali, lalao Maliana http://wp.me/p4FZv7-g1 sy ny Katro, lalao ao Madagasikara » .
Katro, lalaon-drazana ao Madagasikara – sehatra ho an'ny daholobe
Taorian'ny fizaràna ity sary ity, misy mpisera hafa ety anaty aterineto naneho hevitra sy nanamarika endrika maro samihafa amin'io lalao io any amin'ny tany niavian-dry zareo.
Nene Ba, vehivavy namana ao Dakar, manamarika ny fisian'ny lalao tahaka io ao Senegaly :
Wourè no anarany aty aminay
Mina Harker mizara sarinà lalao iray tahaka io saingy fantatra amin'ny anarana hoe Awalé :
Novidiako tany Frantsa tamin'ny 2002 ilay izy, tao aminà toeram-pivarotana mivarotra asa tànana afrikana. Nolazain'ilay ramatoa mpivarotra fa avy any Cote d'Ivoire ilay aty amiko.
Mina koa mizara rohy iray manome antsipirihany ny fiaviana sy ny fitsipik'ilay lalao :
Ny tanjon'ny lalao dia ny hanangona voa betsaka indrindra. Olona roa no milalao azy ka mifanatrika ary misy lavaka 6 eo anoloan'ny tsirairay. Raha misy lavaka hafa, dia natao hametrahana ny zavatra azo izy ireny. Asiana voa 4 isaky ny lavaka
Mina manampy hoe misy endriny iray hafa koa ao Frantsa :
Aty Frantsa, amin'ny tany ary misy lavaka 24 no ilalaovana azy. Fony aho nahita ny Awalé misy lavaka 12, tsy nisalasala aho naka azy, mora entina mivezivezy ilay izy mba hilalaovana. Fa etsy andaniny, tsy nahalala izay anarany aho. Nanao lavaka tamin'ny tany, dia nametraka vatokely ary dia nialalao. Tahaka ny hoe lalaovina any Brezila koa io lalao io.
Sy Sye koa manampy torohay fanampiny momba io lalao io :
Misy any aminà firenena maro io lalao io, tany Ghana no nahalalako azy, izay Oware no anarany. Ity lahatsoratra ity dia miteny fa hoe heverina ho Akan no fiavian'ilay lalao, na avy ao Ghana sy/na Côte d’ivoire, ary dia niparitaka nanerana an'i Afrika tany rehetra tany. Azo marihana ihany koa ny fitoviana tsikaritra amin'ireo anaran'io lalao io, izay toa manamafy ny maha-iray fiaviana azy ».
Ireto avy araka izany ireo anarana samihafa entin'ireo karazany amin'ity lalao ity: Oware (Ghana), Ayò (Yoruba), Awalé (Côte d’Ivoire), Wari (Mali), Ouril na Uril (Cap Vert), Warri (Karaiba), Wali (Dagbani), Adji (Ewe), Nchọ (Igbo), Woure (Senegaly ) ary Awélé (Ga).
Raha toa ka mbola mahafantatra karazany hafa amin'ity lalao ity ianareo, zarao aminay ao amin'ny Twitter (@fasokan na @globalvoices) na ery anaty faritra natao ho fanehoankevitra.
Navoaka voalohany tao amin'ny bilaogin'ny tetikaza “Quand le village se réveille” (Rehefa mifoha ny Iray Vohitra”, tetikasa iray an'ny Rising Voices ity lahatsoratra ity, ary nokirakiraina sy naverina navoaka etoana miaraka amin'ny fanomezana alàlana avy amin'ireo mpikambana ao amin'ilay tetikasa.